လှပသလောက် ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသော အာ့အိုကီဂါဟာရ (青木ヶ原) ခေါ် sucideတောအုပ် - Real Gaming Myanmar
By zc / 1 month ago / Knowledge / No Comments
တောအဝင်တွင် “ကျေးဇူးပြု၍ ပြန်စဉ်းစားကြည့်ပါဦး” နှင့် ”ကလေးတွေနဲ့ ကိုယ့်မိသားစုအကြောင်းကို သေချာပြန်တွေးကြည့်ပါဦး”ဟု သတိပေးချက်ရေးသားထားသည့် တောအုပ်တစ်ခု ဂျပန်နိုင်ငံတွင်တည်ရှိပါသည်။ ဘာကြောင့်များပါလိမ့်?
ဂျပန်နိုင်ငံ၏ နာမည်ကျော်သင်္ကေတဖြစ်သော ဖူဂျီယာမတောင်ကြီး၏ ခြေရင်းတွင် အလွန်တိတ်ဆိတ်၍ နေပြောက်မထိုးလောက်အောင် ထူထပ်သော တောအုပ်တစ်ခုတည်ရှိပါသည်။ ထိုတောအုပ်ကို အာ့အိုကီဂါဟာရ(Aokigahara)ဟုခေါ်ပြီး သစ်ပင်ပင်လယ်ဟု အဓိပ္ပါယ်ရသည်။ ကဗျာဆန်ဆန်လေးလှပနေသော ထိုတောအုပ်သည် စတုရန်းကီလိုမီတာ ၃၀ခန့်ကျယ်ဝန်းသည်။
သွားရောက်လည်ပတ်ဖူးသူတိုင်းက အာ့အိုကီဂါဟာရတောသည် အထိန်းအချုပ်အနှောင်အဖွဲ့ကင်းလွတ်သည့် အလှတရားစစ်စစ်နှင့် တည်ငြိမ်အေးချမ်းသောသဘာဝတရားကိုပေါင်းစပ်ထားသကဲ့သို့ပင် ပြည့်စုံလွန်းလှသည်ဟုညွှန်းကြသည်။
တောင်တက်အားကစားဝါသနာရှင်များကလည်းကျောက်တုံးကျောက်ဆောင်ထူထပ်လှသောမြေပြင်ထူထပ်လှသည့်သစ်ပင်များနှင့် ယှက်ဖြာနေသောသစ်မြစ်များကြားမှ ခက်ခက်ခဲခဲ သွားလာကာ ဖူဂျီယာမတောင်ထိပ်ကိုတက်ရခြင်းကို စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုအနေဖြင့် အရသာတွေ့လှသည်။ကျောင်းသားကျောင်းသူများကလည်း ထိုဒေသ၏ နာမည်ကျော်ရေခဲဂူများကိုလေ့လာရန် မကြာခဏခရီးထွက်လေ့ရှိသည်။
သို့သော် ယခုနောက်ပိုင်း ကာလများတွင် အဆိုပါတောအုပ်သည် လှပသာယာလွန်းသည့် သစ်ပင်ပင်လယ်ဟု နာမည်ကျော်ကြားခဲ့ရာမှ sucide တောအုပ်ဟူသည့် နာမည်အသစ်တစ်ခုနှင့်ပါ ကျော်ကြားလာခဲ့ပြန်သည်။
အာ့အိုကီဂါဟာရတောသည် နေပြောက်မထိုးလောက်အောင်ထူထပ်လွန်း၍ သစ်ပင်ကြားမှထိုးသောနေရောင်အနည်းငယ်မျှသာရှိသည်။အောက်ခြေမြေပြင်သည်လည်း မီးတောင်ချော်ကျောက်များဖြစ်သဖြင့် အလွန်သေးငယ်သော အပေါက်များပါကာ အသံလှိုင်းတုန်ခါမှုများကိုစုပ်ယူနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် အမြဲမှိုင်းညို့နေ၍ တိတ်ဆိတ်နေလေ့ရှိသည်။လာရောက်လည်ပတ်သူတိုင်းသတိထားမိသည်မှာလည်း ထိုသာမန်ထက်ထူးခြားနေသော တိတ်ဆိတ်မှုပင်ဖြစ်သည်။
ကိုယ့်အသက်ရှူသံကိုယ်ပြန်ကြားရသည်အထိတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်မှုနှင့် မှိုင်းညို့အေးစက်နေသော တော၏အလှ သဘာဝသည် အပျော်အပါးသဘောလာရောက်အပန်းဖြေသူအတွက် ကဗျာဆန်၍ လွမ်းစရာဆွေးစရာသဖွယ်ဖြစ်နေသည်။
သို့သော် စိတ်ဓါတ်ကျနေသူ စိတ်ညစ်နေသူများအတွက်တော့ တောထဲဝင်မိပါက စိတ်ခံစားချက်ကို ပိုမိုပြင်းထန်ဆိုးရွားစေကာ ထိုတောအုပ်အတွင်းမှပြန်ထွက်လာလိုခြင်း အလျင်းမရှိတော့ချေ။စစ်တမ်းများအရ တစ်နှစ်လျှင် လာရောက်လည်ပတ်သူများထဲမှ ပျမ်းမျှလူ၁၀၀ခန့်သည် တောအုပ်ထဲမှ ပြန်ထွက်မလာတော့ပဲ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတ်သေလေ့ရှိကြသဖြင့် Sucide တောအုပ်ဟုနာမည်တွင်လာခဲ့သည်။ကမ္ဘာပေါ်တွင် အမေရိကားရှိဂိုးဒင်းဂိတ်တံတားကြီးပြီးလျှင် လူသတ်သေမှုအများဆုံးနေရာဖြစ်လာခဲ့သည်။
အူဘစုတေ့(ubasute) ခေါ် ရှေးဂျပန်ဓလေ့တစ်ခုတွင် ရှေးဘုရင်များလက်ထက်က ဂျပန်၌ စားနပ်ရိက္ခာရှားပါးလာလျှင် မှီခိုစားသောက်နေသူများထဲမှအသက်အကြီးဆုံးသူ (အဓိကအားဖြင့် အမျိုးသမီး)ကို ထိုတောတွင် လာရောက်စွန့်ပစ်ကာ စတေးပစ်လေ့ရှိသည်ဟုပါရှိသည်။ ထိုအစွန့်ပစ်ခံ အဖွားအိုသည် တောနက်တွင်းတွင် အစွန့်ပစ်ခံရသဖြင့် အကူအညီမဲ့၍ အစာရေစာငတ်ပြတ်ကာသေဆုံးသွားပြီး ယူ့ရိန် Yūrei (幽霊) ခေါ် ကလဲစားချေလိုသည့် သူရဲဖြစ်သွားသည်ဟုဆိုသည်။
ထို လက်စားချေလိုသော တစ္ဆေသူရဲများသည် တိတ်ဆိပ်ငြိမ်သက်သောတော၌ ကပ်မှီနေထိုင်ကြသည်ဟုဆိုသည်။ထိုဝမ်းနည်းကြေကွဲဖွယ်ဖြစ်ရပ်များကို ရှေးခေတ်ဂျပန်စာပေနှင့် ကဗျာများတွင်ထည့်သွင်းရေးသားခဲ့ကြသည်။
၁၉၅၀အစောပိုင်းမှစ၍ လာရောက်လည်ပတ်သူများသည် တောအုပ်အတွင်းတွင် ပုတ်သိုးနေသောအလောင်းများကို စတင်တွေ့ရှိခဲ့ရပြီး အများစုမှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတ်သေခဲ့ကြသူများဖြစ်သည်။ အာ့အိုကီဂါဟာရတောအုပ်၏ ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းလှ
သော အူဘစုတေသမိုင်းနှင့် ပတ်သက်၍ လက်ခံရန် အငြင်းပွားကြသော်လည်း ခေတ်သစ်သတ်သေမှုများ၏ အဓိကတရားခံဟုသတ်မှတ်ခံရသူမှာ ၁၉၆၀ခုနှစ်က စာရေးဆရာ ဆဟိကို မက်စုမိုတို(Seicho Matsumoto) ၏ ကူရွိုင်းဂျုကိုင် (Kuroi Jukai -黒い樹海) ခေါ် အနက်ရောင်သစ်ပင်ပင်လယ် ဝတ္ထုစာအုပ်ဖြစ်သည်။
ထိုစာအုပ်သည် အလွန်ရေပန်းစားခဲ့ပြီး ထိုစာအုပ်တွင် အာ့အိုကီဂါဟာရတောအုပ်၏ ထိတ်လန့်ဖွယ်ကောင်းပုံနှင့် ထိုတောအတွင်း သတ်သေသောချစ်သူတို့အကြောင်းဇာတ်လမ်းကို ရေးသားထားသဖြင့် စိတ်ပျက် ထိတ်လန့် ဝမ်းနည်းဖွယ်ရာများနှင့်ပြည့်နှက်နေသည်။ထိုစာအုပ်ထွက်သည့်အချိန်မှစတင်၍ အာ့အိုကီဂါဟာရတောအုပ်တွင်းသို့ ဝင်ရောက်သတ်သေသူများပိုမိုများပြားလာခဲ့သည်။၁၉၇၀မှ စ၍ စေတနာ့ဝန်ထမ်းပရဟိတအဖွဲ့ဝင်များ ဂျာနယ်လစ်များနှင့် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များသည် တောအတွင်းသို့ လစဉ်ပုံမှန်ဝင်ရောက်လှည့်လည်ရှာဖွေကင်းလှည့်လေ့ရှိပြီး လက်ဗလာနှင့် ထွက်လာရသည့်နေ့ဟူ၍မရှိခဲ့ပေ။
၂၀၀၂တွင် ၇၈လောင်း စတင်တွေ့ရှိခဲ့ပြီး ၂၀၀၃တွင် ၁၀၅လောင်းအထိတိုးတက်လာခဲ့သည်။ ၂၀၀၄ခုနှစ်တစ်နှစ်ထဲ၌ပင် အလောင်း၁၀၈လောင်းရရှိခဲ့ပြီး ၂၀၁၀ခုနှစ်၌ သတ်သေရန် ကြိုးစားသူ၂၀၀ခန့်ကို ရဲတပ်ဖွဲ့က အချိန်မှီ ကယ်တင်နိုင်ခဲ့သည်။ ၅၄ဦးကတော့ အထမြောက်ခဲ့ပြီး အလောင်းသာလျှင်ပြန်ရခဲ့သည်။၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် သတ်သေရန် ကြိုးပမ်းမှုအများစုသည် ဘက်ဂျက်နှစ်အကုန် (ဧပြီလ)တွင်အဖြစ်များပြီး ကျူးလွန်သည့်ပုံစံသည် ဆွဲကြိုးချခြင်းနှင့် ဆေးအလွန်အကျွံသောက်ခြင်းဟု တွေ့ရှိခဲ့ရသည်။သေဆုံးသူအရေအတွက်ကိုထုတ်ပြန်ခြင်းသည်လည်း သတ်သေလိုသူများကို လာရောက်ရန်သတ်သေရန် ကြော်ငြာအားပေးသလိုဖြစ်နေဖြင့် ရပ်ဆိုင်းခဲ့သည်။
ဤအရေအတွက်များမှာ ရှာတွေ့သည့်အရေအတွက် သာလျှင်ရှိသေး၍ အပင်နှင့်အမြစ်များကြားရောက်နေသည့် အလောင်းများနှင့် တိရစ္ဆာန်များစားသောက်သွားသော အလောင်းများမပါဝင်သေးပေ။
ထို့ကြောင့်တောအဝင်တွင် “ကျေးဇူးပြု၍ ပြန်စဉ်းစားကြည့်ပါဦး – please reconsider” နှင့် ”ကလေးတွေနဲ့ ကိုယ့်မိသားစုအကြောင်းကို သေချာပြန်တွေးကြည့်ပါ – think carefully about your children, your family”ဟုရေးသားထားရခြင်းဖြစ်သည်။
ကနောင် T harapar . o r g
လှပသလောကျ ကွောကျမကျဖှယျကောငျးသော အာ့အိုကီဂါဟာရ (青木ヶ原) ချေါ sucideတောအုပျ
တောအဝငျတှငျ “ကြေးဇူးပွု၍ ပွနျစဉျးစားကွညျ့ပါဦး” နှငျ့ ”ကလေးတှနေဲ့ ကိုယျ့မိသားစုအကွောငျးကို သခြောပွနျတှေးကွညျ့ပါဦး”ဟု သတိပေးခကျြရေးသားထားသညျ့ တောအုပျတဈခု ဂပြနျနိုငျငံတှငျတညျရှိပါသညျ။ ဘာကွောငျ့မြားပါလိမျ့?
ဂပြနျနိုငျငံ၏ နာမညျကြျောသင်ျကတေဖွဈသော ဖူဂြီယာမတောငျကွီး၏ ခွရေငျးတှငျ အလှနျတိတျဆိတျ၍ နပွေောကျမထိုးလောကျအောငျ ထူထပျသော တောအုပျတဈခုတညျရှိပါသညျ။ ထိုတောအုပျကို အာ့အိုကီဂါဟာရ(Aokigahara)ဟုချေါပွီး သဈပငျပငျလယျဟု အဓိပ်ပါယျရသညျ။ ကဗြာဆနျဆနျလေးလှပနသေော ထိုတောအုပျသညျ စတုရနျးကီလိုမီတာ ၃၀ခနျ့ကယျြဝနျးသညျ။
သှားရောကျလညျပတျဖူးသူတိုငျးက အာ့အိုကီဂါဟာရတောသညျ အထိနျးအခြုပျအနှောငျအဖှဲ့ကငျးလှတျသညျ့ အလှတရားစဈစဈနှငျ့ တညျငွိမျအေးခမျြးသောသဘာဝတရားကိုပေါငျးစပျထားသကဲ့သို့ပငျ ပွညျ့စုံလှနျးလှသညျဟုညှနျးကွသညျ။
တောငျတကျအားကစားဝါသနာရှငျမြားကလညျးကြောကျတုံးကြောကျဆောငျထူထပျလှသောမွပွေငျထူထပျလှသညျ့သဈပငျမြားနှငျ့ ယှကျဖွာနသေောသဈမွဈမြားကွားမှ ခကျခကျခဲခဲ သှားလာကာ ဖူဂြီယာမတောငျထိပျကိုတကျရခွငျးကို စိနျချေါမှုတဈခုအနဖွေငျ့ အရသာတှလှေ့သညျ။ကြောငျးသားကြောငျးသူမြားကလညျး ထိုဒသေ၏ နာမညျကြျောရခေဲဂူမြားကိုလလေ့ာရနျ မကွာခဏခရီးထှကျလရှေိ့သညျ။
သို့သျော ယခုနောကျပိုငျး ကာလမြားတှငျ အဆိုပါတောအုပျသညျ လှပသာယာလှနျးသညျ့ သဈပငျပငျလယျဟု နာမညျကြျောကွားခဲ့ရာမှ sucide တောအုပျဟူသညျ့ နာမညျအသဈတဈခုနှငျ့ပါ ကြျောကွားလာခဲ့ပွနျသညျ။
အာ့အိုကီဂါဟာရတောသညျ နပွေောကျမထိုးလောကျအောငျထူထပျလှနျး၍ သဈပငျကွားမှထိုးသောနရေောငျအနညျးငယျမြှသာရှိသညျ။အောကျခွမွေပွေငျသညျလညျး မီးတောငျခြျောကြောကျမြားဖွဈသဖွငျ့ အလှနျသေးငယျသော အပေါကျမြားပါကာ အသံလှိုငျးတုနျခါမှုမြားကိုစုပျယူနိုငျသညျ။ ထို့ကွောငျ့ အမွဲမှိုငျးညို့နေ၍ တိတျဆိတျနလေရှေိ့သညျ။လာရောကျလညျပတျသူတိုငျးသတိထားမိသညျမှာလညျး ထိုသာမနျထကျထူးခွားနသေော တိတျဆိတျမှုပငျဖွဈသညျ။
ကိုယျ့အသကျရှူသံကိုယျပွနျကွားရသညျအထိတိတျဆိတျငွိမျသကျမှုနှငျ့ မှိုငျးညို့အေးစကျနသေော တော၏အလှ သဘာဝသညျ အပြျောအပါးသဘောလာရောကျအပနျးဖွသေူအတှကျ ကဗြာဆနျ၍ လှမျးစရာဆှေးစရာသဖှယျဖွဈနသေညျ။
သို့သျော စိတျဓါတျကနြသေူ စိတျညဈနသေူမြားအတှကျတော့ တောထဲဝငျမိပါက စိတျခံစားခကျြကို ပိုမိုပွငျးထနျဆိုးရှားစကော ထိုတောအုပျအတှငျးမှပွနျထှကျလာလိုခွငျး အလငျြးမရှိတော့ခြေ။စဈတမျးမြားအရ တဈနှဈလြှငျ လာရောကျလညျပတျသူမြားထဲမှ ပမျြးမြှလူ၁၀၀ခနျ့သညျ တောအုပျထဲမှ ပွနျထှကျမလာတော့ပဲ ကိုယျ့ကိုယျကိုသတျသလေရှေိ့ကွသဖွငျ့ Sucide တောအုပျဟုနာမညျတှငျလာခဲ့သညျ။ကမ်ဘာပျေါတှငျ အမရေိကားရှိဂိုးဒငျးဂိတျတံတားကွီးပွီးလြှငျ လူသတျသမှေုအမြားဆုံးနရောဖွဈလာခဲ့သညျ။
အူဘစုတေ့(ubasute) ချေါ ရှေးဂပြနျဓလတေ့ဈခုတှငျ ရှေးဘုရငျမြားလကျထကျက ဂပြနျ၌ စားနပျရိက်ခာရှားပါးလာလြှငျ မှီခိုစားသောကျနသေူမြားထဲမှအသကျအကွီးဆုံးသူ (အဓိကအားဖွငျ့ အမြိုးသမီး)ကို ထိုတောတှငျ လာရောကျစှနျ့ပဈကာ စတေးပဈလရှေိ့သညျဟုပါရှိသညျ။ ထိုအစှနျ့ပဈခံ အဖှားအိုသညျ တောနကျတှငျးတှငျ အစှနျ့ပဈခံရသဖွငျ့ အကူအညီမဲ့၍ အစာရစောငတျပွတျကာသဆေုံးသှားပွီး ယူ့ရိနျ Yūrei (幽霊) ချေါ ကလဲစားခလြေိုသညျ့ သူရဲဖွဈသှားသညျဟုဆိုသညျ။
ထို လကျစားခလြေိုသော တစ်ဆသေူရဲမြားသညျ တိတျဆိပျငွိမျသကျသောတော၌ ကပျမှီနထေိုငျကွသညျဟုဆိုသညျ။ထိုဝမျးနညျးကွကှေဲဖှယျဖွဈရပျမြားကို ရှေးခတျေဂပြနျစာပနှေငျ့ ကဗြာမြားတှငျထညျ့သှငျးရေးသားခဲ့ကွသညျ။
၁၉၅၀အစောပိုငျးမှစ၍ လာရောကျလညျပတျသူမြားသညျ တောအုပျအတှငျးတှငျ ပုတျသိုးနသေောအလောငျးမြားကို စတငျတှရှေိ့ခဲ့ရပွီး အမြားစုမှာ ကိုယျ့ကိုယျကိုသတျသခေဲ့ကွသူမြားဖွဈသညျ။ အာ့အိုကီဂါဟာရတောအုပျ၏ ကွောကျမကျဖှယျကောငျးလှ
သော အူဘစုတသေမိုငျးနှငျ့ ပတျသကျ၍ လကျခံရနျ အငွငျးပှားကွသျောလညျး ခတျေသဈသတျသမှေုမြား၏ အဓိကတရားခံဟုသတျမှတျခံရသူမှာ ၁၉၆၀ခုနှဈက စာရေးဆရာ ဆဟိကို မကျစုမိုတို(Seicho Matsumoto) ၏ ကူရှိုငျးဂြုကိုငျ (Kuroi Jukai -黒い樹海) ချေါ အနကျရောငျသဈပငျပငျလယျ ဝတ်ထုစာအုပျဖွဈသညျ။
ထိုစာအုပျသညျ အလှနျရပေနျးစားခဲ့ပွီး ထိုစာအုပျတှငျ အာ့အိုကီဂါဟာရတောအုပျ၏ ထိတျလနျ့ဖှယျကောငျးပုံနှငျ့ ထိုတောအတှငျး သတျသသေောခဈြသူတို့အကွောငျးဇာတျလမျးကို ရေးသားထားသဖွငျ့ စိတျပကျြ ထိတျလနျ့ ဝမျးနညျးဖှယျရာမြားနှငျ့ပွညျ့နှကျနသေညျ။ထိုစာအုပျထှကျသညျ့အခြိနျမှစတငျ၍ အာ့အိုကီဂါဟာရတောအုပျတှငျးသို့ ဝငျရောကျသတျသသေူမြားပိုမိုမြားပွားလာခဲ့သညျ။၁၉၇၀မှ စ၍ စတေနာ့ဝနျထမျးပရဟိတအဖှဲ့ဝငျမြား ဂြာနယျလဈမြားနှငျ့ ရဲတပျဖှဲ့ဝငျမြားသညျ တောအတှငျးသို့ လစဉျပုံမှနျဝငျရောကျလှညျ့လညျရှာဖှကေငျးလှညျ့လရှေိ့ပွီး လကျဗလာနှငျ့ ထှကျလာရသညျ့နဟေူ့၍မရှိခဲ့ပေ။
၂၀၀၂တှငျ ၇၈လောငျး စတငျတှရှေိ့ခဲ့ပွီး ၂၀၀၃တှငျ ၁၀၅လောငျးအထိတိုးတကျလာခဲ့သညျ။ ၂၀၀၄ခုနှဈတဈနှဈထဲ၌ပငျ အလောငျး၁၀၈လောငျးရရှိခဲ့ပွီး ၂၀၁၀ခုနှဈ၌ သတျသရေနျ ကွိုးစားသူ၂၀၀ခနျ့ကို ရဲတပျဖှဲ့က အခြိနျမှီ ကယျတငျနိုငျခဲ့သညျ။ ၅၄ဦးကတော့ အထမွောကျခဲ့ပွီး အလောငျးသာလြှငျပွနျရခဲ့သညျ။၂၀၁၁ ခုနှဈတှငျ သတျသရေနျ ကွိုးပမျးမှုအမြားစုသညျ ဘကျဂကျြနှဈအကုနျ (ဧပွီလ)တှငျအဖွဈမြားပွီး ကြူးလှနျသညျ့ပုံစံသညျ ဆှဲကွိုးခခြွငျးနှငျ့ ဆေးအလှနျအကြှံသောကျခွငျးဟု တှရှေိ့ခဲ့ရသညျ။သဆေုံးသူအရအေတှကျကိုထုတျပွနျခွငျးသညျလညျး သတျသလေိုသူမြားကို လာရောကျရနျသတျသရေနျ ကွျောငွာအားပေးသလိုဖွဈနဖွေငျ့ ရပျဆိုငျးခဲ့သညျ။
ဤအရအေတှကျမြားမှာ ရှာတှသေ့ညျ့အရအေတှကျ သာလြှငျရှိသေး၍ အပငျနှငျ့အမွဈမြားကွားရောကျနသေညျ့ အလောငျးမြားနှငျ့ တိရစ်ဆာနျမြားစားသောကျသှားသော အလောငျးမြားမပါဝငျသေးပေ။
ထို့ကွောငျ့တောအဝငျတှငျ “ကြေးဇူးပွု၍ ပွနျစဉျးစားကွညျ့ပါဦး – please reconsider” နှငျ့ ”ကလေးတှနေဲ့ ကိုယျ့မိသားစုအကွောငျးကို သခြောပွနျတှေးကွညျ့ပါ – think carefully about your children, your family”ဟုရေးသားထားရခွငျးဖွဈသညျ။
ကနောငျ T harapar . o r g
Previous: တွဲဖက် စားသုံးခြင်း အားဖြင့် ကျန်းမာရေး ကောင်းကျိုးများစွာ ရရှိနိုင်တဲ့ အစားအစာများ
Next: က မ္ဘာ ကြီး သ ဘာ ဝ ဘေး အ န္တ ရာယ် အ မျိုး မျိုး ဘာ ကြောင့် ကျ ရောက် နေ တာ လဲ…။